Kuvhenekesa mhinduro mugadziri - Shanghai P&Q mwenje Co., Ltd.
P & Q Yakajairwa Zvigadzirwa
Shanghai P&Q Lighting Co, Ltd. yakavambwa muna2005 inyanzvi yekugadzira mwenje mune yekufa-kukanda, jekiseni repurasitiki, uye jira simbi. Inovandudza kubva kune diki kuita hombe ine yayo yekufa-kukanda uye gungano fekitori muHaining nhanho nhanho. Die vachikanda muchina kubva matani 200 ~ 800tons. Isu tinoramba tichiisa mari mumidziyo mitsva kuti tibudirire kutarisana nedambudziko rekuenderera zvirinani, uye tinogara tichipa mhinduro dzakakodzera pane zvese zvinodikanwa muvatengi vedu. P & Q haina jekiseni repurasitiki uye jira simbi fekitori, asi inogona zvakare kupa epurasitiki jekiseni uye jira simbi zvikamu zvinoenderana nevatengi chinodiwa.
UFA KUDZIDZISA ZVIMWE
P&Q muridzi wefekitori akarara muHaining, Zhejiang, China. Pasina isingasviki 6000 m2 Iyo yekugadzirwa inoshandiswa mu ISO9001 yemhando manejimendi. Uye hofisi nefekitori yakachengetedzwa muE ERP system kubvira 2019.
SHEET METAL ZVIKAMU